Oge m na Dubai
Ndị gụsịrị akwụkwọ na United States nwere ike iwepụ ụgwọ nwa akwụkwọ ha ngwa ngwa Na-arụ ọrụ na Dubai
Ndị gụsịrị akwụkwọ n'Amerịka na-ebugharị otu $ 1.5 ijeri nwa akwukwo. N’ihi nke a, ọ na-ewe nkezi afọ agụmakwụkwọ 23 gụchara ụgwọ iji ha. Mana na Federal ọchịchị na-atụ anya ịkwụghachi ụgwọ n'ime afọ 10, na ndị gụsịrị akwụkwọ chọrọ ka ịgbanwee ụgwọ ụmụ akwụkwọ ha maka ezi, ọ ga-abara ha uru ịkwaga mba ofesi na achọ ọrụ na Dubai dị ebube. Yabụ, kọọ bi na Dubai enyere gị aka ịgbanwee ụgwọ nwata akwụkwọ gị ọsọ ọsọ?
Ọnụ ọgụgụ dị ala na-efu
Otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji kpochapụ ụgwọ nwa akwụkwọ gị ngwa ngwa o kwere mee bụ belata azụmaahịa gị na post-college. Site n'ime nke a, ị ga - enwe ike ịkwụ ụgwọ nkwụghachi kwa ọnwa gị ma nwee ike itinyekwu ntakịrị na ha. Ọnụ ọgụgụ sitere na Numebo na-ekpughe na ọnụ ahịa ndị ahịa, ihe oriri, ọnụ ahịa iji rie nri, na ikike ịzụta mpaghara dị elu na US karịa na UAE, na oke nnukwu ọnụ ahịa na-abata na 32.51% maka ndị ahịa. Yabụ, site na isi gaa Dubai, ị ga-enweta otutu ego maka ego gi.
Greatzọ kachasị mma iji wezuga ụgwọ ụmụ akwụkwọ gị maka ihe dị mma bụ ịme ọtụtụ ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa. Ọbụghị naanị na nke a ga - enyere gị aka ịkwụghachi ya ngwa ngwa, mana ị ga-akwụkwa obere ọmụrụ nwa. Ka i nwee ike imeli nke a Ikwesiri inweta ọrụ ngwa ngwa mgbe ị gụsịrị akwụkwọ. Agbanyeghị, nkezi American gụsịrị akwụkwọ ga-eji ọnwa isii itinye na ịga ọrụ ajụjụ ọnụ tupu akpatre enwetara ọrụ. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ọrụ US na-abụkarị chọrọ ndị nwere ahụmahụ ka ha wee bulite uru ha ọsọsọ.
Na ntụnyere, Dubai na-ewere ọnọdụ dị iche iche kpamkpam. N'ime ụzọ atọ mbụ nke 2018, mba ahụ ndị ọrụ kere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50,000 oge, na ndi oru gụnyere oru, IT, ezigbo ala, na oru ndi meghere otutu onodu. Nke kachasị mma, ndị a niile bụ ndị nabatara na ndị na-agụghị akwụkwọ na-azụghị akwụkwọ na ọrụ.
'Ll gha kpochapu nwa akwukwo gi site n’ịkwụ ihe karịrị nke kacha nta ụgwọ nkwụghachi ụgwọ kwa ọnwa. Iji mee nke a, ịkwesịrị ijide n’aka na ị nwetara ọrụ echekwabara n’azụ gị nke ga-akwụ gị ụgwọ nke ọma. Dubai nwere ọnụ ọgụgụ na-enweghị ọrụ nke kachasị dị ala na ụwa na naanị 0.5% n'ihi nchebe ọrụ dị elu. Ya mere, mgbe ị na-arụ ọrụ na Dubai, ị nwere ike ijide n'aka na a ga-enwe ọtụtụ ohere iji nwee ọganihu ma na-akwụ ụgwọ gị, nke ga-eme ka ị nweta ụgwọ ịkwụ ụgwọ nwa akwụkwọ gị kwa ọnwa.
Dubai bụ ebe ịnọ maka ndị gụsịrị akwụkwọ na United States. Ekele dịrị mba a hiri nne ọkọnọ ọrụ, belata ego obibi, yana nchekwa ọrụ, ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji nwere ọtụtụ ohere iji kwụghachi ego ụmụ akwụkwọ na oge ndekọ.
Ebe E Si Nweta: https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Economist
Dị ka Economist, ngụkọta ụgwọ ụmụ akwụkwọ dị na America kwụụrụ na puku ijeri $ 1.3 nke na-erughị $ 37,172 maka nwa akwụkwọ / gụsịrị akwụkwọ. Companylọ ọrụ Dubai City na-ede n'ihi na anyị ga-achọ ịkekọrịta ihe ọmụma anyị ma dee otu isiokwu. Na-ekwukarị, nwee olile anya na nke a ga - enyere gị aka idozi nsogbu ahụ maka etu ụmụ akwụkwọ nke taa ga - esi zere ịbụ ndị ụgwọ ụmụ akwụkwọ riri ha.
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a inye ezi nduzi maka ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.